ကြိုတင် ငွေဖြည့် တယ်လီနော ဖုန်း SIM ကတ်များ ဖြင့် ပြည်တွင်း ခေါ်ဆိုမှုများ သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများ သို့ပါ သင့်တင့်မျှတတဲ့ ဈေးနှုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ဆင်းကတ်အားလုံးကို မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်ဟု . . .
ဆင်းကတ်ကို ပထမဦီးဆုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ရက်ပေါင်း(၁၈၀)အတွင်း ပထမဦးဆုံး . . .
တယ်လီနောရဲ့ Prepaid SIM ကတ်ဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖုန်းနံပါတ်များကို အချိုသာဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို အလည်လာခြင်းဖြစ်စေ အလုပ်ကိစ္စနှင့်ဖြစ်စေ ရောက်ရှိနေသော မိတ်ဆွေတို့အတွက် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာ . . .
သင့်လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားအကျယ်ပြန့်ဆုံးကွန်ရက်နဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
တယ်လီနောမြန်မာ ဆင်းကတ်များကို အခမဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
တယ်လီနောရဲ့ အဆင်အပြေဆုံး ဖုန်းဘေလ်ဖြည့်သွင်းမှုပုံစံများဖြင့် လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ငွေဖြည့်သွင်းလိုက်ပါ။
တယ်လီနော ကြိုသုံးအစီအစဉ်ကြောင့်အရေးပေါ်ဖုန်းငွေ မလုံလောက်မှု တွေမရှိနိုင် တော့ပါဘူး။
နေရာမရွေး အချိန်မရွေး ဖုန်းငွေဖြည့်ကြမယ် လွယ်လွယ်လေး။